Ama-Estate Agents eCalifornia
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo Abathengisi bezindlu California
Ngabe udinga usizo lokuthengisa / ukuthenga ikhaya lakho? Ungakhathazeki
Ngabe udinga usizo lokuthengisa ikhaya lakho? Ungakhathazeki - silapha ukukusiza ukuthi uthengise ikhaya lakho ngendlela efanele nangedola ephezulu. Shayela i-Vic Markarian ku-818-248-8668. Vumela iVic ikusize uthenge noma uthengise ikhaya lakho! Hlela ukuqokwa kwakho ukuze uthole ukuvuselelwa kwemakethe okuphelele! …………………………………………………………….
buka Abathengisi bezindlu eshicilelwe Izinyanga 2 edlule
I-BA in Business Administration / Marketing - Ulwazi namakhono okusiza ukuthengisa kwakho noma ukuthengwa kwekhaya, i-condo noma i-townhome. I-Law Degree - Ulwazi olukhethekile nokuqonda ngezinto zomthetho zenkontileka kanye nokuthengiselana. Ukuhlangenwe nakho kwe-40 + Iminyaka - Isazi esivela kumakhulu we-transa ...
buka Abathengisi bezindlu eshicilelwe iminyaka 2 edlule
Ngabe Ufuna Realtor Ukuthenga Indlu noma Thengisa Ikhaya Lakho?
Uma ufuna i-ejenti enogqozi lokuthenga nokuthengisa izindlu nomhlaba futhi ingaletha imiphumela, lapho-ke uze endaweni efanele! Ngingakunika yonke insiza etholakalayo ukwenza le nqubo icindezeleke kakhulu ngangokunokwenzeka. Njengomhlali wale ndawo, ngingakunika okungaphakathi ...
buka Abathengisi bezindlu eshicilelwe iminyaka 3 edlule
Izinsizakalo zethu zobuchwepheshe zizokusiza ekutholeni indlu yamaphupho akho. Sineqembu labachwepheshe abazinikele kakhulu abazokukhombisa igxathu negxathu kwinqubo yokuthenga ekhaya. Ngemisebenzi yethu ethembekile ethengiswayo, uzokwazi ukufinyelela ezindlini eziningi endaweni ezingakufanele. Lokhu ...
Umthengisi wezezakhiwo noma umthengisi wezezakhiwo (ngokuvamile abizwa ngokuthi a i-agent ye-real estate) ungumuntu osebenza njengomlamuli phakathi kwabathengisi nabathengi bezakhiwo / izakhiwo zangempela kanye nemizamo yokufanisa abathengisi abafisa ukuthengisa nabathengi abafisa ukuthenga. E-United States, ubudlelwano babuqalwa ekuqaleni ngokubhekisela emthethweni ojwayelekile wase-English ejensi, umthengisi enobudlelwano bokuthembana namakhasimende akhe. Umthengisi wezezakhiwo ngokuvamile uthola inkokhelo ebizwa ngokuthi yikhomishini yokufanisa ngempumelelo indawo yomthengisi nomthengi ngendlela yokuthi intengiso ingenziwa. Le khomishini ingahlukaniswa nabanye ababambiqhaza bezakhiwo noma ababambiqhaza ababambe iqhaza lapho kusebenza. Umenzeli wezezakhiwo, okuyigama elisetshenziswa e-United Kingdom, ngumuntu noma ibhizinisi lebhizinisi lakhe elithengisa ngempahla yendawo egameni lamakhasimende. Kunokwehluka okubalulekile phakathi kwezenzo, amandla, izibopho kanye nezikweletu zabathengi nabathengisi bezindlu ezweni ngalinye. Amanye amazwe athatha izindlela ezahlukahlukene zokukhangisa nokuthengisa impahla yangempela. E-United States, noma kunjalo, abathengisi bezindawo kanye nabathengisi babo abasiza abanikazi ukumaketha, ukuthengisa, noma ukuqashisa izakhiwo ngokuvamile kubizwa ngokuthi "uhlu lwabathengi" kanye "nohlu lwamagama." [I-1] Uhlu lwabathengi kanye nama-ejenti bafuna ukumaketha nokuthengisa noma ukuqashisa impahla ngentengo ephezulu etholakalayo ngaphansi kwemigomo etholakalayo engcono. Abanye abathengisi nabenzeli bangagxila ekumeleleni abathengi noma abaqashi. Kodwa-ke, ukunikezwa kwamalayisense njengomthengisi noma umthengisi kugunyaza umnikazi welayisensi ukumela izinhlangothi zombili izinhlangothi zomsebenzi. Ukuzikhethela ukuthi yiluphi uhlangothi oluzomela isinqumo sebhizinisi somnikazi welayisensi.
I-California isimo esifundeni sasePacific eMelika. Ngabahlali abayizigidi ze-39.6, iCalifornia iyona enabantu abaningi kakhulu baseMelika izwe nolwesithathu ngobukhulu endaweni. Inhlokodolobha yesifundazwe iSacramento. Indawo iGreater Los Angeles Area kanye neSan Francisco Bay Area yizindawo zamadolobha wesibili- futhi ezinhlanu ezinabantu abaningi, ezinabahlali be-18.7 million kanye nabahlali be-9.7 million ngokulandelana. ILos Angeles idolobha laseCalifornia elinabantu abaningi kunabo bonke, futhi lelesibili linabantu abaningi, ngemuva kweNew York City. I-California futhi inesifunda esinabantu abaningi kunazo zonke, i-Los Angeles County, kanye nesifunda esikhulu kunazo zonke endaweni, iSan Bernardino County. Idolobha kanye neDolobha laseSan Francisco kuyidolobha lesibili elinezindawo ezinabantu abaningi kunawo wonke ngemuva kweNew York City kanye neqembu lesine elinabantu abaningi kunabo bonke, ngemuva kwezindawo ezinhlanu kuphela ezinhlanu zedolobha laseNew York. Umnotho waseCalifornia we- $ 3.0 trillion umkhulu kunanoma yimuphi omunye umbuso-mkhulu kunalowo weTexas neFlorida kuhlangene- okuhlanganisa ingxenye eyodwa kweziyisithupha ye-GDP ye-US $ 19.4 trillion (kusukela nge-2017), futhi njengamanje umnotho wezwe emhlabeni. Ukube bekulizwe, iCalifornia ibingaba ngumnotho wesihlanu ngobukhulu emhlabeni (inkulu kune-United Kingdom, France, noma i-India), kanye ne-36th-enabantu abaningi kakhulu njenge-2017. Indawo eyiGreater Los Angeles Area kanye neSan Francisco Bay Area yizona ezomnotho zesibili- futhi ezesithathu ngobukhulu emadolobheni ($ 1.253 trillion kanye ne- $ 907 billion ngokulandelana kwe-2017), ngemuva kwendawo yedolobha laseNew York. ISan Francisco Bay Area PSA yayineGDP ephakeme kunazo zonke ezweni ngalinye e2017 (~ $ 94,000) phakathi kwama-PSA amakhulu, futhi iyikhaya lezinkampani ezintathu ezinkulu emhlabeni ngokuqamba kwamakethe kanye nabantu abane kwabacebile kunabo bonke emhlabeni.Isiko leCalifornia kubhekwe isishisekeli somhlaba wonke emasikweni athandwayo, emisha, kwezemvelo nakwezepolitiki. Njengomphumela wokwehluka kombuso nokufuduka, iCalifornia ihlanganisa ukudla, izilimi namasiko avela kwezinye izindawo ezweni lonke nasemhlabeni jikelele. Kubhekwa imvelaphi yomkhakha wamafilimu waseMelika, i-hippie counterculture, ukudla okusheshayo, isiko lolwandle nemoto, i-Intanethi nekhompyutha yomuntu siqu, phakathi kwabanye. ISan Francisco Bay Area kanye neGreater Los Angeles Area baziwa kabanzi njengezikhungo zomhlaba wonke zezimboni yezobuchwepheshe nezokuzijabulisa, ngokulandelana. I-California inomnotho ohluke kakhulu: I-58% yezomnotho wombuso igxile kwezezimali, uhulumeni, izinsizakalo zezindlu, ubuchwepheshe, kanye nezinsizakalo zebhizinisi lobuchwepheshe, kwezesayensi nezobuchwepheshe. Noma ibiza i-1.5% kuphela yezomnotho wombuso, imboni yezolimo yaseCalifornia inemiphumela ephezulu kakhulu yanoma iyiphi i-US Isifundazwe.California ihlangana ne-Oregon ngasenyakatho, iNevada neArizona empumalanga, kanye neMexico yaseBaja California eningizimu (ugu lungasentshonalanga). I-geography eyahlukahlukene yombuso isuka oGwini lwePacific entshonalanga iye esifundeni sezintaba iSierra Nevada empumalanga, futhi kusuka emahlathini ebomvu e-redwood-Douglas enyakatho-ntshonalanga kuya ogwadule lwaseMojave eningizimu mpumalanga. ISigodi Esiphakathi, indawo enkulu yezolimo, sibusa isikhungo sombuso. Yize iCalifornia yaziwa kahle ngesimo sezulu sayo saseMedithera esifudumele, ubukhulu obukhulu balesi sifundazwe buba nezimo zezulu ezihlukahluka ukusuka kwesomvula esishisayo esishisayo enyakatho kuya enkangala eyihlane phakathi nendawo, kanye nentaba yeqhwa ezintabeni. Ngokuhamba kwesikhathi, isomiso kanye nomlilo wasendle sekuyizici ezandayo.Iyini manje iCalifornia okokuqala yaxazululwa yizizwe ezahlukahlukene zoMdabu waseCalifornian ngaphambi kokuba ihlolwe ngenqwaba yokuxoshwa kwaseYurophu phakathi ne-16th ne-17th century. UMbuso WaseSpain wabe usuyibiza ngokuthi iyingxenye ye-Alta California, ngaphakathi koloni lwayo lweSpain. Le ndawo yaba yingxenye yeMexico kwi1821 kulandela impi yayo eyaphumelela yenkululeko kodwa yanqunyelwa e-United States e1848 ngemuva kweMpi yaseMexico-American. Ingxenye esentshonalanga ye-Alta California yahle yahlelwa futhi yamukelwa njengombuso we-31st ngoSepthemba 9, 1850. ICalifornia Gold Rush eqala nge1848 iholele ekushintsheni okukhulu kwezenhlalo nakwezenhlalo yabantu, ngokufuduka okukhulu kusuka empumalanga nakwamanye amazwe okuhambisana nomnotho okuhambisana nawo.